Fianarantsoa : Mpianatry ny Semipi niteraka korontana
Ny alin’ny sabotsy teo tokony ho tamin’ny 10 ora alina no nisehoana korontana tany Fianarantsoa. Nahitana fitorahana fiara teny an-dalana sy tranon’olona tamin’izany.
Hatrany Anjoma ka hatrany amin’ny toerana fiantsonan’ny fiara mpitatitra no nisian’izany, araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana. Niditra an-tsehatra ny polisy ary nisy ny poa-basy. Roa tamin’ireo mpianatra no voasambotra ary efa navotsotra noho ny tsy fisian’ny fahazoan-dalana manenjika « ordre de poursuite » avy amin’ny Lehiben’ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika.
« Nisy mpanao famotorana nalefa any an-toerana hamantatra ny zava-nisy marina, fa raha ny henoko hatreto dia nisy ny fiaraha-mikorana nataon’ireo mpianatra ao amin’ny Sekoly miaramilam-pirenena (Semipi) tamin’io fotoana io. Saika voadonan’ny fiara karetsaka anefa ny iray tamin’ireo mpianatra rehefa nivoaka ny trano filanonana. Teo no nahatonga ny olana ka nampisy ny fitorahana fiara, ka nahavaky fitaratra sy niteraka korontana. Mikasika ny poa-basy dia tsy nitondra basy mihitsy ny mpianatra ao amin’ny Semipi.
Mety ho ireo mpitandro ny filaminana tonga nandamina no voatery nanapoaka basy, satria nisy tamin’ireo fokonolona no tafiditra tao anatin’ilay korontana », hoy ny kolonely Ratovonirina Philibert, tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny Tafika malagasy.
Araka ny fantatra dia aorian’ny famotorana no handraisan’ny Etamazaoro jeneralin’ny tafika fepetra. « Raha voaporofo fa misy nanao hadisoana tamin’ireo mpianatra ireo dia tsy maintsy hisy ny fepetra mifanaraka amin’izay », hoy ihany ity kolonely ity.